Ukufikelela kukaMicrosoft kufumanise ukuba le Database ikwisimo esingahambelaniyo
Ikhaya iimveliso DataNumen Access Repair Ukufikelela kukaMicrosoft kufumanise ukuba le Database ikwisimo esingahambelaniyo
Ulwazi oluneenkcukacha malunga "nokufikelela kwiMicrosoft kufumanise ukuba esi Siseko sedatha sikwiNdawo engahambelaniyo" Impazamo
Xa usebenzisa iMicrosoft Access ukuvula ifayile yedatha yokuFikelela eyonakeleyo, ubona lo myalezo wemposiso ulandelayo (impazamo 9505) kuqala:
Ukufikelela kukaMicrosoft kufumanise ukuba le datha ikwisimo esingahambelaniyo, kwaye uya kuzama ukubuyisa isiseko sedatha. Ngethuba lale nkqubo, ikopi yogcino lwedatha iya kwenziwa kwaye zonke izinto ezifunyenweyo ziya kubekwa kwindawo yogcino lwedatha. Ukufikelela kuya kuvula isiseko sedatha esitsha. Amagama ezinto ezingabuyiswanga ngempumelelo aya kufakwa kwitafile "yeempazamo zokubuyisela".
Isampuli yekrini ibonakala ngathi:
Ungacofa indawo ethi "Kulungile" ukuze uvumele ukufikelela kulungiso lwesiseko sedatha. Ukuba iMicrosoft Office Access iyasilela ukulungisa isiseko sedatha esonakeleyo, iya kubonisa lo myalezo wemposiso ulandelayo (impazamo 2317):
Isiseko sedatha 'xxx.mdb' asinakulungiswa okanye asiyifayile yedatha yokufikelela kuMicrosoft.
apho i-xxx.mdb ligama ledatha yokuFikelela eyonakeleyo.
Umzobo we skrini ujongeka ngoluhlobo:
Oko kuthetha ukuba iMicrosoft Access izame konke okusemandleni ayo kodwa ayinakho ukulungisa ifayile.
Impazamo ithetha ukuba iJet yeJet yokufikelela inokuqonda iziseko ezisisiseko kunye neenkcazo ezibalulekileyo zedatha ye-MDB ngempumelelo, kodwa ifumane ukungangqinelani kwinkcazo yetafile okanye kwidatha yetafile.
Ukufikelela kukaMicrosoft kuya kuzama ukulungisa isiseko sedatha kunye nokulungisa ukungangqinelani. Ukuba iinkcazo zetheyibhile ezibalulekileyo kwindawo yogcino lwedatha azinakulungiswa, izakubonisa oku kuchazwe apha ngasentla “Isiseko sedatha 'xxx.mdb' asinakulungiswa okanye asiyifayile yedatha kaMicrosoft Access.” Impazamo kwaye ulahle umsebenzi ovulekileyo.
Ungazama imveliso yethu DataNumen Access Repair ukulungisa ifayile ye-MDB nokusombulula le mpazamo.
Isampulu ifayile ye-MDB eyonakeleyo eya kuthi ibangele impazamo. mfayile_5
Ifayile ilungiswe nge DataNumen Access Repair: mydb_5_ zilungiswe.mdb